काठमाडौँ -गायक प्रकाश सपुतको नयाँ गीतले सशस्त्र द्वन्द्व, फेरिएको व्यवस्था र नफेरिएको अवस्थाबारे व्यापक बहस सिर्जना गराएको छ । गीतले ‘जनयुद्ध’ का लडाकुको अपमान गरेको भन्दै माओवादी नेता–कार्यकर्ताले आक्रोश पोखेका छन् । चार भ्रातृ संगठनले विज्ञप्ति नै जारी गरेर युट्युबबाटै भिडियो हटाउन र सार्वजनिक माफी माग्न सर्जकसँग माग गरेका छन् । उता सर्जक सपुतले भने वास्तविक पात्रहरूको जीवन कथा बुनेर गीत र भिडियो बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
गीतको पक्षविपक्षमा सामाजिक सञ्जालमा चर्को बहस चलिरहेका बेला कान्तिपुरलाई प्रतिक्रिया दिँदै गायक सपुतले हरेक दिन टेलिभिजनका पर्दा र पत्रपत्रिकाका पानामा देखिएका दृश्यलाई गीतरसंगीतमा बुन्नु कसरी अस्वाभाविक भयो भनेर प्रश्न गरेका छन् । ‘पिरले युद्धकै जगरबलमा व्यवस्था परिवर्तन भएको तर अवस्था परिवर्तन नभएको भन्न मात्रै खोजेको हो । समानताका लागि सँगै लडेका कमरेडहरूबीच बढ्दै गएको असमान दूरी देखाउन मात्रै खोजेको हो । यत्तिको विषय त हामीले टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा हेर्दै आएको होइन र ? पत्रपत्रिकाहरूमा समीक्षा लेखिँदै र पढिँदै आएको होइन र ?’ उनको प्रश्न छ ।
गीतको मुख्य पात्रका रूपमा गायक सपुत र सुरक्षा पन्त छन् । कलाकार पन्तको अभिनयलाई पनि धेरैले मुक्तकण्ठले सराहना गरेका छन् । त्यस्तै अर्की चर्चामा रहेकी कलाकार हुन् केशु पुन मगर केशरी जसले एक पूर्वछापामारको भूमिका खेलेकी छन्, उनी गुजाराका लागि देहव्यापारमा लागेको पात्रका रूपमा भिडियोमा देखिन्छिन् । यो दृश्यलाई माओवादी नेता–कार्यकर्ताले ‘जनयुद्ध’ मा लागेका समग्र महिलाको अपमानका रूपमा अर्थ्याएका छन् । तर, भिडियोमा महिला छापामार हुँदै देहव्यापारमा संलग्न पात्रको भूमिका निर्वाह गरेकी केशरी वास्तविक जीवनमा पनि लडाकु थिइन् । बागलुङ बरेङ गाउँपालिका निवासी केशरी कक्षा ३ पढ्दा नै जनवादी कलाकार बनेर हिँडिन् । उनले आफू ‘जनयुद्ध’ का क्रममा गृहजिल्ला बागलुङदेखि गुल्मीसम्म गीत गाउँदै, जागरण भर्दै हिँडेको अनुभव सुनाइन् । म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएपछि आएका प्रतिक्रियालाई उनले स्वाभाविक रूपमा लिएकी छन् । ‘कसैले राम्रो भनेका छन्, कसैले नराम्रो पनि । तर, खासमा यो भिडियो नेपाली समाजको यथार्थ हो,’ उनले भनिन ।
पूर्वछापामार कलाकार केशरीले यो पात्रका रूपमा प्रकाशले आफूलाई योग्य ठानेकोमै खुसी व्यक्त गरिन् । छापामारका अनेक संघर्षर् देखेकी र भोगेकी उनी गीत र भिडियोले सत्य घटनालाई टपक्क टिपेको मान्छिन् । ‘गीतमा भनिएजस्तो कथाव्यथाहरू हामीले देखेका छौं, सुनेका छौं,’ उनले भनिन् । उनी स्वयम् पनि चिया पसल चलाएर जीवन गुजारा गर्दैछिन् । काठमाडौंको नेपालटारछेउ शेषमती पुलनजिकै उनको पसल छ, उनी कलाकारितामा पनि संघर्षरत छिन् ।
‘सबैखाले प्रतिक्रिया हेर्दै छु । आफ्नै सिर्जनालाई तपाईंहरूको नजरबाट पनि हेर्दै छु । मैले गलत गरेको हो कि ? तपाईहरूले गलत बुझेको हो, समीक्षा गर्दै छु,’ उनले भने  ।
सपुतले कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह, नियत र उद्देश्य नराखेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । ‘सबैमा सबै खाले क्षमता हुँदैन । मभित्र राजनीतिक चेत छ तर त्यति धेरै राजनीतिक विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्दिनँ । जसरी अघिल्ला बोल माया, दोहोरी ब्याटल, गलबन्दी, बदला बरिलै, फुटेका चुरा, मेरो पनि हैन र यो देश, कुरा बुझ्न पर्छ गीतहरूमा कथा बुन्थें, पात्र बनाउँथें, टुक्का टिप्थें, लय हाल्थें र रेकर्डरछायांकन गर्थें । यसमा पनि त्यही प्रक्रिया छ ।’ तर सपुतको भिडियो आपत्तिजनक भन्दै माओवादी पंक्तिले सामाजिक सञ्जालमा लगातार आक्रोश पोखेको छ ।
माओवादीको भ्रातृ संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग वाईसीएलका संयोजक सुमन देवकोटाले ट्वीटरमार्फत प्रकाश सुपतको गीत युट्युबबाट हटाउन माग गरेका छन् । लेखेका छन्, ‘देशको राजनीतिक रूपान्तरणका लागि लडेका महिला छापामारलाई चरित्रहीन नारीका रूपमा चित्रण गरिएको कथित म्युजिक भिडियो सह्य छैन । गणतन्त्रको सेनानीको अपमान हुने शब्दरदृश्य तुरुन्त हटाउन म प्रकाश सपुतसँग अनुरोध गर्दछु ।’ माओवादी केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटाले पनि फेसबुक पोस्टमा भिडियो आपत्तिजनक मात्रै नभएर दण्डनीय भएको टिप्पणी गरेका छन् । माओवादीको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले त गायक सपुतलाई चेतावनी दिएकी छन् । उनले फेसबुकमा स्टाटसको अन्तमा लेखेकी छन्, ‘पिर नामक भिडियो सार्वजनिकमा माफी मागेर तत्काल युट्युबबाट नहटाइए तपाईंको यस्तो गैरजिम्मेवार हर्कत सहेर नबस्ने चेतावनी दिन चाहन्छु ।’
सकारात्मक र नकारात्मक प्रतिक्रिया आउँछन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि हतोत्साही नै गराउन खोजिन्छ भनेर आफूले नठानेको उनको भनाइ छ । ‘यस्ता विषय उठान गर्दा आउने राजनीतिक दबाबहरूको केही अनुमान गरे पनि गीत हटाउनेसम्मकै माग उठ्छ भनेर आकलन गरेनछु । यसलाई गलत व्याख्या गरिन्छ र निरुत्साहित गर्न खोजिनेछ भन्ने कुराको हेक्का राखेनछु,’ उनले भने ।
माओवादीका पूर्वलडाकु तेज दोङले बिम्बहरू जीवन्त उतार्न सफल भएको भन्दै धन्यवाद दिएका छन् । उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘पिर हेरेपछि विद्रोहमा सामेल सिपाहीको नाताले जे देखेंरभोगें पिर जीवन्त रूपमा उतार्नु भएकामा साधुवाद ।’
संगीतकार आभाष म्युजिक भिडियोमाथि दलसम्बद्ध व्यक्तिबाट आएका आक्रोश र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति समग्र वाक् स्वतन्त्रताकै विरुद्धका आएको टिप्पणी गर्छन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई अनुदार राजनीतिको उदाहरणका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘यो गीतमा त्यस्तो आपत्ति मान्नुपर्ने कुरै केही छैन । युद्ध लड्नेहरू अहिले कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने देखाइएको न हो ।’ उनले यस्तो प्रवृत्तिले गीतरसंगीत सर्जकलाई भयपूर्ण अवस्थामा लैजाने र उनीहरूको कल्पनाशक्तिमाथि प्रहार हुने बताए ।
राजनीतिक मात्र होइन, धार्मिक संगठन पनि गीतरसंगीतको विरोधमा उत्रने गरेका उदाहरण छन् । २०७७ को साउनमा गायिका सोफिया थापाले ‘अबको तीज नो व्रत प्लिज बोल’ को गीतको म्युजिक भिडियो हाइलाइट्स नेपाल नामक युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरेकी थिइन् । लगत्तै थापालाई हिन्दु जागरण नेपाल र विश्व हिन्दु युवासंघ अन्तर्राष्ट्रिय समिति नामक संस्थाका प्रतिनिधि बताउनेहरूले गीत हटाउन दबाब दिएका थिए ।